मनमोहन कार्डियोभास्कुलर एण्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर – Health Post Nepal
संक्रमण पुष्टिपछि मनमोहन सेन्टरको मुटुरोग सेवा स्थगित, १६ चिकित्सकसहित ४० क्वारेन्टाइनमा
चिकित्साशास्त्र अध्ययान संस्थान (आइओएम) को मनमोहन कार्डियोभास्कुलर एन्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा भर्ना भएकी एक महिलामा कोरोना संक्रमण भेटिएपछि अस्पतालको मुटुरोग सेवा स्थगित भएको छ ।
अस्पतालमा जेठ ६ गते भर्ना भएकी हेटौडाकी एक ५४ वर्षीया महिलामा शुक्रबार साँझ कोरोना पोजेटिभ पुष्टि भएकाे थियो ।
अस्पतालका अधिकांश मुटुरोग विशेषज्ञ महिलासँग प्राइमरी कन्ट्रयाकमा रहेको घोषणा गरी क्वारेन्टाइनमा गएपछि मुटुरोग सेवा स्थगित गर्नु परेको हो । मुटुरोगको ओपिडीसँगै क्याथ ल्याबसमेत बन्द हुने अस्पताल स्रोतले जनाएको छ ।
मुटुको समस्या भएकी ती महिलामा निमोनियासमेत देखिएपछि चिकित्सकले शंका लागेर कोरोना परीक्षण गर्दा संक्रमण भेटिएको हो ।
सोलगतै राति ६ घण्टासम्म अस्पतालका चिकित्सकहरूको बैठक बसेर थप रणनीति बनाएको थियो । अहिले ती महिलालाई गणेशमान सिंह इएनटी भवनमा रहेको आइसोलेसन वार्डमा सारिएको छ ।
अस्पतालमा कन्ट्रयाक ट्रेसिङका क्रममा अस्पतालका १५ भन्दा बढी चिकित्सकले आफू संक्रमित महिलासँग प्राइमरी कन्ट्याकमा आएको घोषणा गरेपछि सबै चिकित्सक होम/इन्स्टिच्युसन क्वारेन्टाइनमा छन् ।
चिकित्सक, नर्स र अन्य कर्मचारीसमेत गरेर ४० जनाको हाराहारीमा क्वारेन्टाइनमा गएको अस्पताल स्रोतले बनाएको छ । अस्पतालका ३ मात्रै मुटुरोग विशेषज्ञले आफू प्राइमरी कन्ट्याकमा नरहेको भन्दै क्वारेन्टाइनमा नजाने बताएका छन् ।
आइओएमअन्तर्ग कोभिड टिमका सदस्यसमेत रहेको सर्जन डा. रञ्जन सापकोटाले संक्रमित महिलाको कन्ट्रयाक ट्रेसिङका आधारमा सम्पर्कमा आएकाकाहरूको स्वाब संकलन, क्वारेन्टाइन, बिरामीको व्यवस्थापन भइरहेको छ । ‘सकेसम्म छिट्टै सबै सेवालाई सुचारु गर्ने प्रयात्नमा छौ,’ डा. सापकोटाले भने ।
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका स्रोतका अनुसार ती महिला मनमोहन सेन्टर आउनुपूर्व गंगालाल र चावहिलको एक निजी अस्पतालसमेत पुगेको पाइएको छ ।
गंगालाल अस्पताल स्रोतका अनुसार ती महिलाले गंगालालमा कम्तीमा ४५ मिनेटमा मात्रै बिताएकी थिइन् । त्यस क्रममा एक्सपाेजर भएका हुनसक्ने कम्तीमा ३ जनाको स्वाब संकलन गरेर पिसिआर गर्ने तयारी भएको छ ।
Posted in कोरोना अपडेट, मुख्य खबरTagged मनमोहन कार्डियोभास्कुलर एण्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरLeaveaComment on संक्रमण पुष्टिपछि मनमोहन सेन्टरको मुटुरोग सेवा स्थगित, १६ चिकित्सकसहित ४० क्वारेन्टाइनमा